ORINASAN-TSINOA : Taorian’ny famotorana, nadoboka am-ponja izy valo lahy nanafika
Valo lahy tamin’ireo iraika ambin’ny folo nandray anjara mivantana sy ireo mpiray tsikombakomba no tra-tehaky ny vela-pandrika nataon’ny polisy santraly, fiaraha-miasa tamin’ireo olona tsara sitrapo. 13 février 2020
Nosamborin’ny polisy ary dia nanokafana fanadihadiana ireto roa lahy tratra voalohany mpanera ny harato halatra, dia niaiky fa anisany nandray anjara mivantana tamin’ny halatra natao tao amin’io orinasan-tSinoa io izy ireo, izay mpiambina sivily teo aloha tao. Ary namboraka ny tsy ambara telo nandritra ny halatra natao ireto voasambotra ireto, koa noraisim-potsiny izy valo mirahalahy mpangalatra avy eo. Dia mbola tratra tany amin’izy ireo ny “fibres” fanamboarana sambo 33 fonosana mivalona sy ny harato miisa 28 gony voamarina fa very tao. Samy niaiky ny heloka vitany izy ireto, raha mbola misy kosa ny namany telo lahy izay tsy maintsy hokarohina maika, hoy i Tabaly Ramahefarilala Fabio, kaomisera santraly eto Mahajanga. Andian’olona mpiasa sy mpiambina sivily tao amin’ity orinasa ity ihany no nanatanteraka ny halatra bevava izao. Marihina fa efa niakatra fampanoavana ny talata 11 febroary tolakandro teo izy valo mirahalahy ireto, ary naiditra vonjimaika eny amin’ny fonjan’i Marofoto miandry ny fotoam-pitsarana azy ireo.
Fantatra ihany fa voasambotry ny polisy santraly tao amin’ny fokontanin’Amborovy ihany koa ireo olona roa nividy ireo entana halatra ireo, ka niatrika ny fampanoavana ny alarobia 12 febroary tolakandro teo ihany.
Nisesisesy tao ho ao izay ny vokatra azon’ireo Polisim-pirenena teto Mahajanga, saingy mbola miantso ny tolo-tanana avy amin’ny vahoaka tsara sitrapo i Tabaly Ramahefarilala Fabio, kaomisera santraly hanome vaovao marim-pototra azy ireo, hamongorana ireo mpanao ratsy.